मन्जु बिष्ट वाईवा, पाेम्फा राई र शिरमाया तामाङद्वारा सिन्धुपाल्चोक पहिरो पिडितको लागि सहयोग दिइयो «
प्रकाशित मिति : 21 October, 2020 1:22 pm
काठमाण्डौ – मन्जु बिष्ट वाईवा, पाेम्फा राई र शिरमाया तामाङद्वारा सिन्धुपाल्चोक प’हिरो पि’डितको लागि सहयोग अमेरिकाबाट २४ जना साथीहरुसँग मिलेर सहयोग गरिएको छ । अमेरिकाबाट मन्जु बिष्ट वाईवा, पाेम्फा राई र शिरमाया तामाङद्वारा सिन्धुपाल्चोक लिदि वडा नं-२ मा भि’षण बा’ढीप’हिरोबाट बि’स्थापित भएका परिवारहरूलाई सहयाेग रकम रुपैया २ लाख ५१ हजार हस्तान्तरण गरि दिएका छन ।
मन्जु बिष्ट वाईवा, पाेम्फा राई र शिरमाया तामाङको बिषेश सहयोग रहेको थियो । समाजसेविको रुपमा अग्रस्थानमा आउने नाम मन्जु बिष्ट वाईवा हुन, उहाले धेरैलाई पबित्र रुपमा सेवा सहयोग गरेकी छिन ।
बा’ढी प’हिरो पि’डित २८ जनालाई सहयोग प्रद्रान दिएकाे हाे । साथै, विशेष गरि सहयोग अभियान टिमले चाहिँ पि’डितमा पनि अझ पि’डितलाई सहयाेग गरेकाे ११ जना परिवार घर जग्गा र परिवार गु’माएकाेलाई प्रती ब्यक्ती १२ हजारको दरले सहयोग दिएको कुरा अभियानमा टिमसँग गएकी गायिका तथा सन्चारकर्मी मिरा राईले बताईन ।
साथै १७ परिवार जग्गा र घर गु’माएको परिवारलाई प्रती ब्यक्ती ७ हजारको दरले दिईकाे र मार्क्स समेत पनि वितरण गरेकाे कुरा राईले बताईन । मनोरन्जको टिम (दिलिप राई र मेरी राई), समाजसेवी देब वाइबा लगायतको ब्यक्ती बा’ढी प’हिरो भएको घ’टना स्थलमा नै गएर सहयोग रकम बाढिएको हो । दशै तिहार जस्तो चाडको लागी केहि रकमले ठुलो सास फेर्न सकेको कुरा पि’डितको अन्तरबार्तामा देख्न सकिन्छ ।
मन्जु बिष्ट वाईवा, पाेम्फा राई र शिरमाया तामाङ तिनै जना हाम्रो समाजको हिरो हुन, उहाहरुलाई बिशेष धन्याबाद दिन्छौ । उहाहरुको सहयोगको लागी हामी सबै गर्बको छातिले सगरमाथा जस्तै बनाएको कुरा मनोरन्जको साथीका निर्देशक दिलिप राईले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकमा मनसुनको सुरुआतदेखि नै बाढीपहिरो गइरहेको छ। जनधनको क्ष’ति पनि उही जिल्लामा बढी भएको देखिन्छ। भूकम्पले थिलथिलो भएको जमिनमा विकास संरचना विपद्मैत्री नहुँदा पहिरोका घटना धेरै भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। भिरालो र जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती भएकाले क्ष’ति धेरै भएको हो। ‘मनसुन कम हुने समयमा बाढीपहिरोका ठूला–ठूला घ’टना भएका हुन्छन ।
को हुन मन्जु बिष्ट वाईवा ?
‘सादा जिबन उच्च बिचार’ सिद्धान्तको एऊटा अपत्यारीलो उदाहरणको अर्को नाम हो ‘मन्जु बिष्ट वाईवा’ । सिन्धुपाल्चोकको एऊटा गरीब तामाङ परिवारको जेठी सुपुत्रीको रुपमा जन्मिएकी आफु १० बर्ष हुँदा आमा गुमाएकी थिईन ।
र, १३ बर्षको उमेर देखि लाऊ-लाऊ, खाऊ-खाऊ र शैक्षिक शिक्षा हासिल गर्नु पर्ने उमेरमा परिवारको सुखि जीवन र भविष्यको खोजिमा आफ्नो कलिलो उमेरलाई दाऊमा राखि भारत हुदै अमेरीकामा पुगिन । प्रदेशी जिबन ४० बर्ष बिताएकी जिबनलाई स’ङ्घर्ष गरेकी महिला हुन । हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान देशको लागी मन्जु बिष्ट वाईवा एउटी सफल महीला र एक स’ङ्घर्षिल नारीको रुपमा एक उदारण हुन ।
बाकी सहयोग भिडियोमा हेर्नुहोस :
फोटो हेर्नुहोस ! यो फोटो मनोरन्जको साथी मार्फत लिएको हो ।